प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटः ‘धारा ७६’ मै जोड - Sankalpa Khabar
5. कांग्रेस सरकारमा किन जाने, किन नजाने ?
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटः ‘धारा ७६’ मै जोड
७ माघ ०७:१३
आजको पत्रपत्रिकामा फरक फरक विषयबस्तुले प्राथमिकता पाएका छन् । अदालतमा सुनुवाई भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धामा न्यायाधीश र अधिबक्ताको सपवालजावाफलाई सबै प्रत्रिकाले प्राथमिकताको साथ छापेको छ ।
नागरिक दैनिकले धारा ७६ व्याख्यामा सवालजवाफ शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।
यो खबरलाई गोरखापत्र दैनिकले पनि छापेको छ । पत्रिकाले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा ‘धारा ७६ मा’ जोड दिइएको लेखेको छ । इजलासले मुख्यतः संविधानको धारा ७६ को पूर्ण व्याख्यामा कानुन व्यवसायीको राय माग गरिरहेको छ । धारा ७६ बारे राय माग्ने क्रममा इजलासले उपधारा १ र ७ को व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी स्पष्टता खोजेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार उपधारा १ राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी व्यवस्था छ
राजधानी दैनिकले भारतले अनुदानस्वरूप दिएको खोप नेपाल ल्याउने प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको समाचार लेखेको छ । भारतले नेपाललाई यही साताभित्र अनुदानस्वरूप खोप उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । भारतले आज क्रमिक रूपमा नेपालसहित माल्दिभ्स, बंगलादेश, भुटान, म्यानमारलगायतका देशलाई खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पृष्ठमा कलिला मनमा हिंसाको छाप शिर्षकमा खबर लेखेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएका बालिकाहरुबारे अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएका बालिकाहरू गुलाबसाह खातुन, कञ्चन पञ्जियार, रेश्मा रसाइली, सोनाली र पूजा साहको तस्वीरसहित समाचार प्रकाशित छन् । जघन्य हिंसा र यातनाबाट कुनै एक जना मात्रै पीडित नभई थुप्रै कलिलो मनमा यसको छाप पर्ने समाचारमा उल्लेख छ।
आफूविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्न प्रचण्डको माग, अदालतको अपहेलना मुद्दामा…
१६ फाल्गुन १३:२७
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्री बादल नेतृत्वको वार्ता टोली गठन,…
विप्लव समूहका महोत्तरी–सर्लाही इञ्चार्ज पक्राउ
१७ फाल्गुन ११:५७
सभामुखले ओली पक्षका विशाल भट्टराईलाई मुख्य सचेतक नमान्ने संकेत